एकपटक प्रयोग गरेको तेल पुनः तताएर प्रयोग गर्नु घातकः डा. ओममूर्ति - Everest Dainik - News from Nepal
एकपटक प्रयोग गरेको तेल पुनः तताएर प्रयोग गर्नु घातकः डा. ओममूर्ति
काठमाडौं । तपाईं एकपटक प्रयोग गरेको तेल पुनः तताएर प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यदी गर्नुहुन्छ भने अब यो बानी छाड्नुहोस् ।
किनकी एकपटक प्रयोग गरीसकेको तेल पुनः तताएर प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ । एकपटक प्रयोगमा आएको तेल पुनः प्रयोग गर्दा मानिसमा मुटु, स्नायु, कलेजो सम्बन्धि रोग लाग्न सक्ने र क्यान्सर समेत हुने खतरा रहेको वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओम मूर्ति अनिलले बताए ।
याे पनि पढ्नुस बढ्दै तेलको मूल्य, ८० डलरसम्म पुग्ने विश्लेषण
यसो भन्छन् डा. अनिल
सूर्यमुखी तथा भटमासको तेललाई पटक–पटक तताउदा राम्रो फ्याटहरु ट्रान्सफ्याटमा परिणत हुन्छ । जसले शरीरमा नराम्रो कोलेस्ट्रोल बढाउँछ । यसले रक्तनलिमा रगत जम्ने सम्भावना बढाउँछ । तेललाई पटक–पटक तताउँदा त्यसमा उत्पादन हुने टोक्सिनले मुटुरोग, स्नायुरोग, कलेजो रोग तथा क्यान्सर हुने खतरा बढ्छ ।
याे पनि पढ्नुस इरानको मिसाइल आक्रमण लगतै विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा ह्वात्तै वृद्धि
त्यसले यी रोगहरु लाग्नबाट बच्नको लागि तेल पुनः तताएर प्रयोग गर्ने बानी हटाउनुपर्छ । मुटु, कलेजो स्नायु र क्यान्सरका बिरामीले यस्तो तेल प्रयोग गर्ने नहुने डा। अनिलको भनाइ छ । खबरहब डटकमबाट
ट्याग्स: डा. ओम मूर्ति अनिल, तेल